Taageerihii Farmaajo ee Kenya lagu afduubtay oo la helay | KEYDMEDIA ONLINE
Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, ayaa ahaa falanqeeye ka hadla arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Wuxuuna ahaa bare jaamacadeed. Waxaa si weyn loogu yaqanaa taageeridda Fahad iyo Farmaajo.
NAIROBI, KENYA- Sideedii Bishan September ayaa koox aan la garaneyn ku riteen gaari, xillki uu ku socdaalayay waddada Turbman ee ku xigta City Market, ee Bartamaha Nairobi.
Gaarigaas ayaa si xawaare ah u dhaqaaqay markii ay raggii watay ay gudaha ku riteen Dr. Cabdiwahaab. Kuwaas oo ula cararay goob aan la garaneyn. Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, ayaa ahaa falanqeeye ka hadla arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Wuxuuna ahaa bare jaamacadeed.
Wuxuu qayb ka ahaa qaar ka mid ah machadyada cilmibaarista ee ka dhisan Geeska Afrika, isaga oo sidoo kalena warbaahinta Kenya ugu caansan wax ku qori jirey. Markii hore, waxaa la tilmaamay inay "afduubteen" rag dhar-cad ah oo afar ruux ka koobnaa oo uu wehliyo dareewalkii gaariga u kaxeynaayay.
Bogagga baraha bulshada sida Twitter-ka, ayaa si weyn looga dhex arki jiray qoraalladiisa, waxaana u danbaysay qoraal kooban oo uu kaga warramaay aragtidiisa ku aadan xaalka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya iyo khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble.
Waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay nin si wayn u taageera Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo, wuxuuna dhaliilaa siyaasiyiinta mucaaradka ah. Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo muddo 19 Ciaho la weysnaa ayaa ldib u helay xurayadiisa, sida laga soo xigtay xubno kamida Qoyskiisa.
‘‘Walaalkeen Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad ayaa la sii daayay, waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan difaacayaasha xorriyadda dalkeenna iyo dibaddaba oo garab istaagay, aqoonyahankeenna/dagaalyahankeenna qiimaha badan Nabadda iyo degganaanshaha gobolka. Waa inaan ku difaacnaa dhibicdeena ugu dambaysa ee xorriyadda hadalka/ururrada.’’ Siyaasi Faarax Macallin oo ahaa guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, ayaa sidaasi ku daabacay bartiisa Twitter-ka.
Haki Africa, oo ah urur u dooda xuquuqda aadanaha oo qaabilsanaa daba galka kiiskiisa ayaa qoraal kooban oo kasoo baxay lagu sheegay in Cabdiwahaab uu hadda la joogo reerkiisa. Faahfaahin intaa ka badan oo la xariirta kiiska afduubka aqoonyahanka lama bixin, iyadoo Haki Africa ay xaqiijisay in qoyskiisu ay warbaahinta kala hadli doonaan kiiska afduubka aqoonyahanka.
Agaasimaha Fulinta ee Machadka Daraasaadka Istaraatijiyadda Geeska Afrika, Cabdisamad, wuxuu si weyn u taageeraa Farmaajo, wuxuuna dhawaan bartiisa Twitterka ku qoray, hadallo, si weyn looga carooday kadib markii uu isku dayay inuu kiiska Ikraan Tahliil, la xariiriyo dalalka Ingiriiska iyo Imaaraatka (UK & UAE), isagoo marin-habaabinaya kiiska isla-markaana ka leexinayay Fahad iyo Farmaaajo.